Puntland oo la shaacisay Xiliga ay dhaceyso doorashada xubnaha Aqalka sare | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Puntland oo la shaacisay Xiliga ay dhaceyso doorashada xubnaha Aqalka sare
Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa go’aamiyay waqtiga ay dhaceyso doorashada xubanaha aqalka sare ee Maamulkaasi.kadib kulan aan caadi ahayn oo uu Baarlamaanku maanta ku yeeshay Magaalada Garoowe ee xarunta Mamulkaasi Puntland.
Xildhibaannada ayaa isku raacay in Maalmaha Isniinta iyo Talaadada soo socota ay xubnaha u tartamaya aqalka sare ay ku bixiyaan lacagaha laga rabo, sidoo kalena ay maalinta Arbacada ah soo gudbiyaan Araajida, si ay doorashada u dhacdo khamiista oo ay Taariikhda ku beegan tahay 20ka Bishan Octoober.
Maamulka Puntland waxaa uu ka mid ahaa maamulladii Guddiga doorashada dadban ee heer Federaal ay ku celiyeen kadib markii ay buuxin waayeen Kootada Haweenka ee 30%.
Maamulka Puntland ayaa la sheegayaa in uu isbeddel ku sameeyay xubnihii uu horay u soo gudbiyay, waxaana hadda 11ka Kursi ee uu aqalka sare ka helay Maamulkaasi ku tartamaya 29xubnood oo laga rabo in ay ka soo baxdo 11 xubnood.
Maamulka Galmudug,ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada xubanaha aqalka sare iyada oo 8 Xubnood ay labo ka mid ah Haween noqdeen.